Muuri News Network » Joogitaanka: Ciidamada AMISOM ee Somalia oo go’aan Cusub laga soo saaray..
Joogitaanka: Ciidamada AMISOM ee Somalia oo go’aan Cusub laga soo saaray..
15-ka xubnood ee Golaha Ammaanka ee QM waxay isku raaceen in Hawlgalka AMISOM xilliga loogu kordhiyo muddo hal sanno.
Xubnaha Golaha Ammaanka ee QM waxay Kulan Khaas ah ka yeesheen Hawlgalka AMISOM, waxayna isla garteen in xilliga loo kordhiyo si horumar looga sameeyo Dagaalka Alshabaab iyo Qabsoomidda Doorashooyinka Somalia ka dhici doonto dabayaaqadda sannadkan.
Xilli-u—kordhinta Hawlgalka AMISOM ayaa waxay ku soo beegantay, iyadoo ay Dowladaha ku bahoobay Midowga Europe “EU” go’aansadeen inay 20% dhimaan Kharajkii ay ku taakuleyn jireen Hawlgalka Ciiddanka AMISOM.
Bishii la soo dhaafay, Kaaliyaha Xoghayaha Guud ee QM ugu qaabilsan Arrimaha Siyaasadda, Jeffrey Feltman iyo Ergayga Gaarka ee QM ee Arrimaha Somalia, Michael Keating waxay kulan la yeesheen Hogaamiyaha Muqdisho Xasan Sheekh oo ay isla eegeen Hawl-qabadka AMISOM.
Dhinaca kale, Golaha Ammaanka ee QM waxay shalay Xilli-kordhin u sameeyeen Hawlgalka QM ee Somalia (UNSOM), kadib, markii ay Golaha soo saareen Qaraar tirsigiisu yahay 2275 ee sannadkan 2016-ka oo lagu muujiyey inu Hawlgalka UNSOM lagu kordhiyey muddo hal sanno oo ku eg bisha Maarso 30-da ee sannadka soo socda.
Goluhu waxay hoosta ka xariiqeen muhiimadda UNSOM iyoTaageeradda ay Dowladda Federalka Somalia ka siiyaan dadaalladda Nabadda iyo Dib-u-heshiisiinta, dhamaystirka Nidaamka Dowladda, Dib-u-eegista Dastuurka iyo Diyaarinta Doorashooyinka 2016-ka iyo 2020-ka.